तथ्य र प्रमाणका आधारमा छिमेकीसँग वार्ता गर्ने प्रयास हुन्छ : सञ्चारमन्त्री डा. खतिवडा « Khasokhas
तथ्य र प्रमाणका आधारमा छिमेकीसँग वार्ता गर्ने प्रयास हुन्छ : सञ्चारमन्त्री डा. खतिवडा
सरकारले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुसार मिलाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय भएको सरकरका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।
अर्थ/सञ्चारमन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता डा. खतिवडाले अनुसूची ३ र निशान छापलाई परिमार्जन गर्न मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश हुने बताउनुभयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको हो ।
❒ कोरोना भाइरस कोभिड–१९ पछि सुस्ताएको व्यवसाय क्रमशः पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएसँगै राजस्व सङ्कलन बढ्दै, हालसम्म
आज कार्यभार सम्हालेको तेश्रो दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुईवटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्
❒ कार्यभार सम्हालेको तेश्रो दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकन परिवार र विजनेशलाई आर्थिक राहत
अमेरिकी राजदूत बेरी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेट, राष्ट्रपति बाइडेनका प्राथमिकताबारे छलफल
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले राष्ट्रपति जो बाइडेनका शीर्ष प्राथमिकताहरूबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी